नूबिया रेड जादू: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र रिलिज | Androidsis
गेमि smart स्मार्टफोनले बजारमा खुट्टा टेक्न शुरू गर्यो। रजार फोन यस बजार क्षेत्रको अग्रणी थियो, त्यसपछि शाओमीको ब्ल्याक शार्कले दुई साता अघि प्रस्तुत गर्‍यो। अब यी दुई मोडेलको बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी छ। यो Nubia रेड जादू को बारे मा छ। चिनियाँ ब्रान्ड गेमिंग फोनका लागि फेसनमा सामेल हुन्छ।
यस नुबिया रेड म्याजिकले चुहावट साघुँरो भएको थिएन, त्यसैले यसको बारेमा धेरै थोरै जानकारीहरू थाहा थियो। यद्यपि हामी यसको उपकरणको आधिकारिक प्रस्तुति पछि अन्तत: यस उपकरणलाई जान्न सक्षम भएका छौं। हामी फर्मको गेमि phone फोनबाट के आशा गर्न सक्छौं?
उपकरणको डिजाइनले तुरून्त आँखा समात्छकिनभने यो निस्सन्देह एक खेल स्मार्टफोन हुन धेरै उपयुक्त छ। थप रूपमा, फोनमा फ्यानहरू छन्। केहि चीज जसले खेल्दा फोनलाई न्यानो पार्न फोनलाई मद्दत पुर्‍याउँछ। त्यसैले नुबियाले यी विवरणहरूलाई ध्यानमा राखेको छ। यी हुन् उपकरण विशिष्टता:
स्क्रिन: फुलएचडी + रिजोलुसन र १:: ratio अनुपात (२१6० x ०)) को साथ inches इन्च
प्रोसेसर: स्नैपड्रैगन 835। अक्टा-कोर २.2.35 गीगाहर्ट्जमा घडीयो
GPU: एड्रेनो 540०
आन्तरिक मेमोरी: 128 जीबी
रियर क्यामेरा: २ MP MPf/ १.24 अपर्चर र K०fps मा KK रेकर्डिंगको साथ।
फ्रन्ट क्यामेराएपर्चरf/9को साथ 2.0 MP।
अपरेटिङ सिस्टम: Android .8.0.० Oreo स्टक
ब्याट्री: द्रुत चार्जको साथ 3800,२२० एमएएच
कनेक्टिविटी: फिंगरप्रिन्ट रिडर, ब्लुटुथ .5.0.०, GPS
अरूलाई: फ्यानहरू, फोन पावरको लागि बटन, एलईडीको प row्क्ति
नुबियाले उपकरणको साथ घर बाहिर विन्डोको बाहिर फ्याक गर्न चाहेको छ। किनभने हामी एक मोडलको सामना गरिरहेका छौं जुन यसको शक्तिको लागि बाहिर खडा छ र ठूलो प्रदर्शनको आश्वासन दिन्छ। अन्तिम विवरण तल डिजाइन को ख्याल राख्नुको साथै। हामीसँग १:: ratio अनुपातको एक स्क्रीन छ, धेरै फेसनल। त्यसोभए यो नुबिया रेड म्याजिकले हरेक तरिकामा डेलिभर गर्दछ। पछाडिको भाग विशेष गरी एलईडी बत्तीको प row्क्तिको साथ हडताल गर्दछ.
Nubia रेड जादू अप्रिल २ from देखि बिक्री मा जानेछ, केहि दिनमा। अहिलेसम्म पुष्टि गरिएको मूल्य हो 399 डलर। जे होस् यो प्रत्येक बजारमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले यो सम्भव छ कि युरोपमा यो केहि महँगो छ। तर हामी चाँडै नै थाहा पाउनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » नूबिया रेड जादू: बजारमा नयाँ गेमि smartphone स्मार्टफोन